× Introduction Setup Php Tag Variables Echo Strings Operators Making Comments Include File Require File If If--Else Elseif Switch Forms Functions Arrays While Loop For Loop For Each Loop Do While Loop Post & Get Files File Create File Open File Close File Write File Read File Delete File Append File Truncate Date Times
☰ Menu Content
Studying an example should make us understand array more.
$student_array = "Bobby";
$student_array = "Sam";
$student_array = "Charlie";
$student_array = "Clive";
In the above example we useasingle variable "$student_array".
We made use of the key / value structure of an array.
The keys were the numbers we specified in the array and the values were the names of the peoples.
Each key of an array representsavalue that we can manipulate and reference.
The general form for setting the key of an array equal toavalue is:
Two more employees of mine are "
There is another way of specifing an array, we called it an associative array.
Instead of using number as the key of an array, some descriptive name can be used asakey.
echo "Bob is being paid - $" . $salaries["Bob"] . "
echo "Sally is being paid - $" . $salaries["Sally"] . "
echo "Charlie is being paid - $" . $salaries["Charlie"] . "
Usefulness of arrays will become clearer when we gets to for, loops and while loops statements.
Note For more detail please see Php Manual at http://www.php.net
Gmail တွင် account ဖွင့်၍ နာမည် တူရှိပြီး နေလျင် နာမည် နောက်တွင် နံပါတ် ထဲ့၍ account ဖွင့်လေ့ ရှိကြ ပါသည်။ ဥပမာ အားဖြင့် koko@gmail.com, koko1@gmail.com, koko2@gmail.com, koko3@gmail.com, koko4@gmail.com, koko5@gmail.com, koko6@gmail.com စသည်ဖြင့် ကွဲပြားအောင် သတ်မှတ် လေ့ရှိ ပါသည်။
Array ဆိုသည်မှာ အထက်တွင် ဖေါ်ပြ ထားသော Gmail ဥပမာ ကဲ့သို့ variable ကို index ဟုခေါ်သော နံပါတ် များပေး၍ သုံးစွဲ ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ နံပါတ် ထိုး၍ သုံးသော array များကို Numerically Indexed Arrays ဟုခေါ် ပါသည်။ အောက်တွင် ပြထားသော ဥပမာ ကိုကြည့်ပါ။
အထက်တွင် ဖေါ်ပြ ထားသော Numerically Indexed Array "$student_array" တွင် key / value စနစ် ကိုသုံးထား ပါသည်။
, , ,  စသည် တို့သည်၊ key များဖြစ်ပါသည်။ Bobby, Sam, Charlie, Clive တို့သည် value များဖြစ်ကြ ပါသည်။
Array တခု၏ format မှာအောက် ဖေါ်ပြပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
Array ကိုသတ်မှတ် ပုံနောက် တနည်း ရှိပါ သေးသည်။ သူငယ်ချင်း များတွင် နာမည် တူနေလျင်၊ ဖက်တီး မောင်မောင်၊ အရှည်ကြီး မောင်မောင်၊ လေးလုံး မောင်မောင်၊ ဗိုက်ပူ မောင်မောင် စသည်ဖြင့် နာမဝိသေသန (adjective) နှင့်တွဲ ခွဲခြား တတ်ပါ သေးသည်။ ထိုစနစ် ကိုသုံးသည့် array များကို Associative Arrays ဟုခေါ် ပါသည်။
အောက်တွင် ဖေါ်ပြ ထားသော Associative Array ဥပမာ များကို လေ့လာပါ။
['Bob'], ['Sally'], ['Charlie'], ['Clare'] စသည် တို့သည်၊ key များဖြစ်ပါသည်။ 2000, 4000, 600,0တို့သည် value များဖြစ်ကြ ပါသည်။
Arrays များကို နောက် သင်ခန်း စာများတွင် ဖေါ်ပြမည့် for loops နှင့်while loops တို့တွင် အလွန် အသုံးတည့် ကြောင်းတွေ့ရ ပါလိမ့်မည်။
Php Tutorial Content (menu)